မင်းလဲသိပြီးသားပါ ပေါက်ဖော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မင်းလဲသိပြီးသားပါ ပေါက်ဖော်
Posted by မောင် ပေ on Mar 25, 2013 in Creative Writing, Think Different | 14 comments
မင်းနဲ့ ငါ နဲ့ ဟာ စာဖတ်တာ ဝါသနာပါတဲ့ ကောင်တွေ
ဘီယာသောက်တဲ့ နေရာ ၊ အဝေရာ ဟောတု တဲ့ နေရာ မှာ အကြိုက်ချင်းတူ ၊ နဲနဲလေးသောက်ပြီးရင် ရင်ထဲခံစားရသမျှတွေ ကို ကေတီဗွီမှာ မိုက်ခဲရင်း ဖွင့်ချနေကြ ကောင်တွေဆိုတော့ ၊ ငါ့ရဲ့ရင်တွင်းဖြစ်တွေကို မင်းကိုပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့ကွာ ။
ပေါက်ကြီး ဆိုလို့ .. ပြောရဦးမယ် ငါ့ရောင်ရေ..
တို့ မန်းလေးသားတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခင်ကြပြီဟေ့ ဆိုရင် ၊ နာမည်တစ်လုံးကိုယူပြီး ကြီးထဲ့ ခေါ်လေ့ရှိကြသကွ ။ ဥမပါ မင်းနာမည် “ပေါက်ဖော်” ဆိုတာကို ငါ က ပေါက်ကြီးလို့ ခေါ်တာမျိုးပေါ့ကွာ ။
မင်းတို့ မြို့ ဆီမှာတော့ ဘယ်လိုနေလဲ ငါအတိအကျ မသိဘူးပေါ့ကွာ
ငတို့ ဆီမှာတော့ကွာ ၊ ငတို့ မြို့ မှာပေါ့ကွာ… လူတွေ တစ်နေ့ တခြား စည်းကမ်းမဲ့လူကြတယ်ဟေ့ ။
ခေတ်ကြီးက ဒီမိုကရေစီသို့လို့ ၊ ခေါင်းစဉ်တပ်နေကြပေမယ့် ၊ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာဘာလဲ မသိပဲ အော်နေကြတဲ့သူတွေချည်းပဲ ။ အဲ..ငါကိုယ်တိုင်လဲ မသိပါဘူးကွာ ။ ငါ့မှာလဲ ငါ့ရဲ့သမုဒ်ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာလေးအတွက် တစ်နေ့ ပြီးတစ်နေ့ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတာကလား ။
အဲတစ်ခုတော့ ရှိတယ် ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့ ၊ ငါနေတဲ့ မြို့ နယ် က မဲပေးဖို့ပါတော့ ၊ NLD ကို ငါပေးခဲ့ပါတယ်ကွာ ။ အဲ့တုန်းက အကြောင်းတွေ ကို နောက်မှ အေးဆေးပြောပြပါဦးမယ်ကွာ ။
တို့ စကားမှာ “ ဖင်မနိုင်ပဲ ပဲကြီးဟင်း မစားနဲ့” ဆိုတာ ရှိတယ်ကွ ၊ မင်းသိပြီးသားပါကွာ ။
စကားရဲ့ ဆိုလိုရင်းကတော့ ၊ မဖြစ်နိုင်တာကို ဇွတ်မလုပ် ဖို့ ပေါ့ကွာ ၊ ဥပမာ ဆိုရရင်ကွာ လူတစ်ယောက် က ပုံမှန်အတိုင်း ထမင်းစားရင် နှစ်ပန်းကန် ကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ် ဆိုပါစို့ ကွာ ၊ တစ်ရက်ကြတော့ ၊ အလှူတစ်ခုမှာ အဝကျွေးတာမြင်တော့ ၊ လေးပန်းကန် စားရင်တော့ တစ်နေ့ စာ လွတ်မှာပဲ ဆိုပြီး ၊ ပုံမှန်စားနေကြထက် ပိုစားတော့ ၊ တန်ဆေးလွန်ဘေး ဖြစ်ပြီး ဒုက္ခများရသလို ပေါ့ ။
ဒါနဲ့ .. ကြားဖြတ်ပြောရဦးမယ်ကွ ။
ငါက မန်းတလေးမှာနေတာ မင်းသိပါတယ် ။
တို့ မန်းတလေးမြို့ မှာ ဆိုင်ကယ်တွေ အရမ်းများသလို ၊ လမ်းတွေ အရမ်းကြပ်သလို ၊ တစ်ရက်တစ်ရက် ဆေးရုံမှာ ဆိုင်ကယ် အက်စီးဒန့် ကြောင့် ကုပေးနေရတဲ့ လူနာတွေလဲ မနည်းဘူး ငါ့ရောင်ရေ ။
မနည်းဆို… ယာဉ်စည်းကမ်း ၊ လမ်းစည်းကမ်း ဘာမှ နားမလည်ပဲ ဆိုင်ကယ်တတ်မောင်းနေတဲ့ကောင်တွေများတာကိုးကွ ။ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရဲ့ ဈေးကလဲ ၂သိန်းလောက် သုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကို ၊ မောင်းရတဲ့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလောက် ဝယ်ရနေပြီဆိုတော့ကွာ ၊ ဆိုက်ကားသမားကလဲ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မရှိပဲ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီမောင်းလို့ မောင်းနဲ့ ကွာ ။
နောက်ပြီး တို့ မြို့ မှာက ယာဉ်ကြီးနဲ့ ယာဉ်ငယ် ၊ ဖြစ်လိုက်ရင် ယာဉ်ကြီးအမှား လို့ ပဲ သတ်မှတ်ကြတော့ ၊ အဲဒါကို သိထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်သမားဆိုရင် ပိုလူပါးဝတယ် ငါ့ရောင်ရဲ့ ။
မိုက်ရင်တိုက်သွား ဆိုသလိုမျိုး အပေါက်ချိုးနေကြတာကလား ။
ပြီးရင်တော့ လျှော်ကြေးတောင်းဖို့ ၊ သူရို့ တွေ အော်လာမှာ သေချာတယ်ကွ ။
ဈေးပေါပေါနဲ့ သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေလာတာကို ဝမ်းသာမိပေမယ့် ၊ ခပ်လွယ်လွယ်နဲ့ မသာပေါ်ဖို့ အကြောင်းတွေ မြန်လွန်းနေတာကိုလဲ သတိထားနေရတယ်မောင် ။
အခုတော့ တို့ ဆီမှာ ၊ ယာဉ်မောင်းတွေကို အယ်လ်ကိုဟော တက်စ်တာ နဲ့ စစ်တော့မယ်လို့ သိရတယ် ။ ကောင်းပါတယ်ကွာ ။ ဒါပေသည့် ၊ ငါ့လို တစ်ပတ် ၄ရက်လောက် ဘီယာသောက်တဲ့ ကောင်တွေတော့ မချောင်ဘူးကွ ။ ညသောက်ပြီး ပြန်ရင် ၊ အယ်လ်ကိုဟော တက်စ်တာတွေကို ရှောင်နေရပြီ မောင် ။
မင်းကလဲ မင်းတို့ ဆီမှာ လိုင်းကားတွေ ၊ တက်ဆီတွေ ၊ ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ အပြိုင်ကြဲကြပုံကို ပြောတော့ ၊ တို့ ဆီက ဆိုင်ကယ်သမားတွေ နဲ့မင်းတို့ ဆီက ကားသမားတွေ ကို တစ်လမ်းထဲ ပေးမောင်းချင်စိတ်ဖြစ်မိသေးသား ။
အခုလောလောဆယ်တော့ ဆိုင်ကယ်မောင်း ကားမောင်းတဲ့နေရာမှာ ခဏရပ်ပြီး ၊ နောက်နေ့ မှ ဆက်ပြောကြသေးတာပေါ့ကွာ ။
ဟိုတလောက မင်းအက်ဆီးဒန့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာလဲ တော်တော်သက်သာလာလောက်ပြီလို့ ငါမျှော်လင့်မိပါတယ် ။
နောက်မှ ဆက်ပြောတော့မယ်….. ငါ့ရောင်ရေ
တော်ကြီးပြီကွာ ။ (ခရက်ဒစ်တူ ရေငံပိုင်ဦးဖော)
အားပေးသွားကြောင်းလေး … ပေါက်ဖော်မိတ်ဆွေ ကဗျာဆရာ ရေ။ :-)
ပေါက်ဖော်လည်း ဘယ်ဆီရောက်ပါလိမ့် မောင်ပေရယ်။
ရွာထဲ ပြန်ဝင်မလာသေးတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျ …
သူကောင်းသွားတဲ့အချိန် ပြန်လာမှာပါ …
ကျုပ်လည်း အဲ့ဒီအချိန်ကို မျှော်လင့်နေတာ …
မန်းလေးဆိုင်ကယ်နဲ့  ရန်ကုန်တက်စီ တွေ့ရင်တော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့ ဦးပေရယ်
ယဉ်ကြီးယဉ်ငယ် ဥပဒေကို ပြန်စီစစ်သင့်တာအမှန်ပါပဲ
ဆက်စောင့်ဖတ်မယ် ကိုပေရေ ….
တိုပေ လူဆိုး အယ်လ်ကိုဟောတက်စတာ နဲ့ စစ်ရမယ် .
အရှိန်လေးရလို့ ဖတ်ကောင်းကာနီးမှ တော်ကြီးပြီကွာတဲံ့ … :hee:
သိပြီးသားဆိုလည်း ပြောမနေနဲ့ ကပေရာ….။ ဒီမှာလှုပ်စိလှု ပ်စိနဲ့ အချိန်မရဘူး ပြန်တော့မယ် နောက်မှ ကွန်မန့်ရှည်ရှည်လာရေးတော့မယ်
ဒီတစ်ခေါက် မန်းလေးပြန်ပြီး …….
အရင်က ဘယ်သတ္တိနဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးခဲ့ပါလိမ့် တွေးကြောက်မိသေး။
၃ ယောက်လည်း စီးနေခဲ့ကြတာ။
ကိုပေရေ.. မငြင်းပါနဲ့ဂျာ.. ငြင်ပါးနဲ့
ဖတ်ရှုအားပေးသွားသူအပေါင်းနဲ့ ကွန်မင့်များပေးကြသော ဘော်ဘော်များအားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ခညောင်းကြပါစေဗျား
ဆိုင်ကယ်တွေ ကားတွေ ဗရမ်းဗတာ နိုင်တဲ့နေရာကတော့
ကျုပ်တွေ့ဖူးသမျှ မြ၀တီ အဆိုးဆုံးပဲဗျာ….
လမ်းတွေက ကျဉ်းတယ်….. ကားတွေက လိုင်စင်မဲတွဈေးပေါးပေါးနဲ့ရတော့
လူတိုင်းနီးပါ ကားဝယ်စီးလို့ရတော့ ကားတွေပေါးတယ်……….
ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ အလွန်စိတ်ပျက်မိပါ၏………….
မြန်မြန်ဆက်ပြောဖို့ တောင်းဆိုပါသဗျ :hee: